काठमाडौं महानगरमा कोरोना : २७ जनाको मृत्यु, ३७०० संक्रमित, कुन वडामा कति?
महानगरका यी हुन् १३ हटस्पट, सुस्त कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ
२०७७ भदौ २३ मंगलबार १४:३७:०० प्रकाशित
काठमाडौं– नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या ४७ हजार २ सय ७६ पुगेको छ। त्यसमध्ये सक्रिय संक्रमितको संख्या १६ हजार २ सय ५९ रहेको छ। यस्तै, ३ सय कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ।
अहिले कोरोनाको ‘हटस्पट’ काठमाडौं उपत्यका भएको छ। उपत्यकामा ८ हजार ५ सय ८१ जना संक्रमित रहेका छन्। सोमबारमात्र ३ सय २६ जना संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौंमा २९३, ललितपुरमा २० र भक्तपुरमा १३ संक्रमित थपिएका थिए। काठमाडाैंमा मात्र ६ हजार ९ सय १७ जनामा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ भने काठमाडौं महानगरपालिकामा ३ हजार ७ सय ६३ जना संक्रमित छन्।
आधा संक्रमित होम आइसोलेनमा
महानगरका सवै वडामा संक्रमण फैलिइसकेको छ। यसरी संक्रिमत भएकामध्ये आधा मानिस होम आइसोलेसनमा छन्। कुल संक्रमितमध्ये १२ सय २२ जना होम आइसोलेसनमा छन्। ११ सय ४० जना अस्पताल तथा संस्थागत आइसोलेसनमा रहेको महानगरको सहरी स्वास्थ्य महाशाखाको तथ्यांकमा उल्लेख छ। हालसम्म महानगरका २७ जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ भने ९६० जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्।
काठमाडौ महानगरका १३ वटा वडामा एक सयभन्दा बढी संक्रमित छन्। सबैभन्दा धेरै वडा नम्बर १५ स्वयम्भुमा छन्। स्वयम्भुमा २ सय ९९ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । त्यस्तै वडा नम्बर १७ खुसीबुँमा २ सय ५९ संक्रमित छन्। वडा नम्बर ३२ कोटेश्वरमा २ सय ४० जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
महानगरको सहरी स्वास्थ्य महाशाखाको तथ्यांक अनुसार ७ हजार ५ सय ६१ जनाको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भएको छ। ३ हजारभन्दा बढी संक्रमित रहेको महानगरमा दोब्बरमात्र मानिसको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरिएको छ। एउटै संक्रमितको सम्पर्कमा १० देखि १५ जना रहनसक्छन्। परिवारका सदस्यको मात्र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरे पनि १० जनाको हुनुपर्ने देखिन्छ। तर एउटा परिवारका एक जना सदस्यको मात्र गरेर कसरी संक्रमित पत्ता लाग्छन् भन्ने प्रश्न देखिएको छ ।
कतिपय वडामा कुल संक्रमितको संख्याभन्दा कम मानिसको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरिएको तथ्याक महानगरसँग रहेको छ।
महानगरको सबैभन्दा धेरै संक्रमित रहेको वडा नम्बर १५ स्वयम्भूको अवस्था हेर्दा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको दयनीय तस्बिर प्रष्ट हुन्छ। हालसम्म यो वडामा २९९ जना संक्रमण पुष्टि भएको छ। उनीहरुध्ये २२८ जना अस्पताल तथा आइसोलेसन सेन्टर र ४५ जना होम आइसोलेसनमा छन्। एक जनाको मृत्यु भएको छ भने २५ जना निको भएर फर्केका छन् । तर, यो वडामा जम्मा ९० जनामात्र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेका छन्।
वडा नम्बर ८ जयबागेश्वरीमा ४८ जना कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेका छन् जबकि यहाँ ७६ जना संक्रमित छन्।
सम्पर्कमा आएकाको छिटो पहिचान गर्न ‘अपरेसन सेन्टर’
काठमाडौं महानगरपालिकाले कारोना भाइरस सक्रमितको सम्पर्कमा रहेकालाई छिटो पहिचान गर्नका लागि अपरेसन सेन्टर स्थापना गरेको छ। पहिलो चरणमा यसअघि बढी संक्रमित देखिएका वडाहरुमा स्वयंसेवकसहित स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरिसकिएको छ। कामपा जनस्वाथ्य विभाग प्रमुख हरि कुँवरका अनुसार ३२ वटै वडामा टोली बनाएर सोमबारबाट काम सुरु भइसकेको छ। यस कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनकै लागि कामपाले १० जना जनस्वाथ्यकर्मीलाई करार सेवामा लिएको छ भने २० स्वयंसेवक पनि परिचालन गरेको छ।
उक्त टोलीले होम क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा बसेकाको अवस्थाबारे जानकारी लिने र आवश्यकताका आधारमा अस्पताल लैजानेसम्मको काम गर्नेछ। टोलीलाई ‘केस’को पहिचान गर्नेदेखि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरी पिसीआर परीक्षण गर्नेसम्मको अधिकार दिएको छ।
कुन वडामा कति संक्रमित?
वडा न १ नक्साल ९७
वडा न २ लाजिम्पाट २८
वडा न ३ महारागञ्ज २२९
वडा न ४ धुम्वाराही ११३
वडा न ५ हाँडीगाउँ ६६
वडा न ६ बौद्ध ५४
वडा न ७ मित्रपार्क ११८
वडा न ८ जयवागेश्वरी ७६
वडा न ९ गौशाला ६४
वडा न १० बानेश्बर ११५
वडा न ११ त्रिपुरेश्वर १८७
वडा न १२ टेकु ४९
वडा न १३ कालिमाटी १७१
वडा न १४ कलंकी१७२
वडा न १५ स्वायम्भु २९९
वडा न १६ बालाजु २१
वडा न १७ खुसीबुँ २५९
वडा न १८ नरदेवी ५३
वडा न १९ कंकेश्वरी १५
वडा न २० भीमसेनस्थान १८
वडा न २१ लगन २५
वडा न २२ संकटा १९
वडा न २३ ओमबहाल २२
वडा न २४ मखन २१
वडा न २५ नःघल ४५
वडा न २६ लैनचौर १११
वडा न २७ इनबहाल १८३
वडा न २८बागवजार १३०
वडा न २९ डिल्लीबजार ८८
वडा न ३० ज्ञानेश्वर ४५
वडा न ३१ शान्तिनगर ८०
वडा न ३२ कोटेश्वर २४०